टिकाले पाईन् नयाँ जिवन - Paschimnepal.com
टिकाले पाईन् नयाँ जिवन
दैलेख, तत्काल अप्रेशन नभए जे पनि हुन सक्ने सम्भावना भएपछि नारायण नगरपालिका – २ जाहकोटकी १९ वर्षिया टिका भण्डारी जिल्ला अस्पताममा छड्पटाईरहेकी थिईन् । तत्काल सुर्खेत लादाँ समय घर्किने हुँदा जिल्ला अस्पताल दैलखका प्रमुख डा. निराजन पन्तले विरामीका आफन्तसंग सल्लाह लिए ।
र, तुरुन्तै एपेन्डिक्स (सानो आन्द्र संक्रमण भई सुनिएको) अप्रेशन गरे । डाक्टरले लिएको रिक्स कम्ति थिए । न श्रोत साधन छ न त यसअघि जिल्लाबाट यस्तो अप्रेशन नै भएको थियो । तर, पनि डा. पन्तसंगै डा. जनकराज पाण्डेसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले अप्रेशनमा तलिन भएर लागे । अन्ततः अप्रेशन सफल भयो । विरामी टिका भण्डारीसंग अप्रेशनका लागि समय निकै कम थियो । न उनी सुर्खेत जानलाई समय थियो न दैलेखमै अप्रेशन सुविधा । तर, डाक्टरहरुले अप्रेशन सुविधा नहुँदा पनि आफ्नो कुशलता, दक्षता प्रस्तुत गरे र, टिकाको सफल अप्रेशन गरे । टिकाले नयाँ जिवन पाईन् पाईन ।
जिल्ला अस्पतालका अनुसार दैलेखमै पहिलो पटक यस्तो विरामीको अप्रेशन गरिएको जनाईएको छ । आन्द्रमा यो संक्रमण भए चाँडेमा ६ घण्टाभित्र फुट्न सक्छ । डाक्टरका अनुसार जति सक्दो चाडो अप्रेशन गर्नुपर्छ । सामान्यतया २४ घण्टाभित्र अप्रेशन गरिसक्नुपर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । अप्रेशनका लागि निकै कम समय थियो । डा निराजन पन्तले भने, हामी अनुभवी भएकाले साधनश्रोतको अपुग हुदाहृँदै पनि सफल अप्रेशन भयो ।
जिल्लामै पहिलो पटक अप्रेशन गर्दै डा. पन्तको टोली ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, साउन २६, २०७५ 4:33:44 PM
Prevअसारे योजना रोक्ने निर्णय
Nextक्लिन सुर्खेत अभियान शुरु